Xilligii goynta, tani waa mowduuc dhalinyaro iyo shaqsiba leh. Ka fogow inaad dadka kale la joogto, u doodista tibaaxaha toosan, yar, jab, iyo mid gaar ahba waa astaamaha jiilkan; goynta waa qaab fudud oo kaftan iyo saaxiibtinimo leh oo ay ku muujiyaan, sidoo kale waa is-falgal firfircoon ...
Habka xisaabinta ee isticmaalka dunta tolidda
Habka loo xisaabiyo qadarka dunta tolidda. Kordhinta qiimaha alaabada ceeriin ee dharka, qiimaha dunta tolidda, gaar ahaan dunta dhamaadka tolidda sare, ayaa sidoo kale kor u kacaysa. Si kastaba ha noqotee, hababka hadda jira ee loo xisaabiyo qadarka dunta tolidda ee ay adeegsadaan shirkadaha dharka ayaa ah ...
Wax soo saarka iyo iibinta mashiinka harqaan warshadaha Shiinaha ayaa hoos u dhacay sanadka 2019 Baahida loo qabo dharka iyo dharka dharka (oo ay ku jiraan mashiinada dharka iyo mashiinada harqaanka) ayaa sii waday inay hoos u dhacdo tan iyo 2018. Wax soo saarka mashiinada harqaanka warshadaha ee sanadka 2019 ayaa hoos u dhacay ...